Igazi kwi-Urine emadodeni-Iba yingxaki nini | Amadoda aseStylish
Igazi kumchamo emadodeni
UAlicia tomero | 28/10/2021 22:42 | Ukuhlaziywa ukuba 28/10/2021 22:43 | Ukunyamekela, Kufanelekile, ZeMpilo
Ngaba wakha weva nge i-hematuria? Ligama elichaza xa kukho ingxaki kumchamo okanye kwizintso, apho amadoda anokufumanisa ukuba anawo. igazi kumchamo wakho.
Ubukho babo bunokothusa, kodwa kukho amaxesha apho kuphononongo lwesiqhelo okanye uhlalutyo ubukho bayo bufumaneka phantsi kokuqwalaselwa kwe-microscope. Kuzo zombini ezi meko kufuneka wenze njalo misela apho ingxaki ikhoyo kwaye ufune isisombululo ngokukhawuleza.
1 Siziva njani xa sinegazi emchameni wethu?
2 Iintlobo ze-hematuria
3 Izinto ezibangela ukuba sinxulumane negazi kumchamo
Siziva njani xa sinegazi emchameni wethu?
Ngokwesiqhelo ayiniki ntlungu okanye intlunguKuphela ukujonga ubukho begazi kumchamo. Uyabona ukuba xa ubona kuqala igazi linomnye umbala, inokujika ibe bomvu, ipinki okanye ibe mdaka, yonke into iya kuxhomekeka kubukho beeseli ezibomvu zegazi kumchamo.
Okunye ukutya okunemibala eyomeleleyo ezifana namaqunube, beet okanye rhubarb kwakhona ukwenza isibofo kuba umchamo udyojwe ngumbala. Okanye kwimeko yamayeza athile afana ne-laxative Ex-lax.
Kukho iintlobo ezimbini ze-hematuria ezinokuhlelwa. Lowo sele simazi nguye ihematuria enkulu kwaye yile nto sinokuyibona ngeliso lenyama. Kwaye kunjalo i-hematuria encinci apho igazi lingabonwa ngeliso lenyama, kodwa liya kubonwa ngomntu enkosi ngemicroscope.
Kwiimeko ezininzi, xa le meko ifunyenwe, ngokuqhelekileyo yenziwa ukukhangela ukufumanisa ingxaki, apho kuphela phakathi kwe-0,2% kunye ne-0,4% yamatyala zibandakanya ukugula okunzulu. Ezinye iimeko ezifunekayo azizi kuthabatha naziphi na izehlo ezinkulu.
Izinto ezibangela ukuba sinxulumane negazi kumchamo
Usulelo okanye iingxaki ezinxulumene nedlala lobudoda zezona meko zixhaphakileyo kwaye zinento yokwenza negazi kumchamo. Okulandelayo, sichaza zonke izinto ezinokwenzeka ezinokubandakanya:
Ukwandiswa kwedlala lengqula kunokubangela iingxaki ezikungqongileyo. Eli dlala liphantsi kwesinyi kwaye likwindawo ephezulu ye-urethra. Ukuba inyuka ngobukhulu kunokwenzeka ukuba velisa ingozi apho unokufumana igazi elincinci kumchamo. Xa ufikelela kwiminyaka engama-50 ubudala, usengozini yokubandezeleka kolu lwandiso.
Usulelo lwezintso: ubukho bayo bunokuvela xa kukho usulelo nalapho iintsholongwane zikhoyo kwizintso. Olu sulelo luhamba lusuka egazini ngokusebenzisa ureters yezintso. Iimpawu zayo ngumkhuhlane kunye neentlungu ecaleni.
Usulelo lomjelo womchamo: Usulelo lwenzeka xa ibhaktheriya ingena nge-urethra kwaye ihleli kwisinyi. Ivelisa iimpawu ezifana nokutshisa, intlungu xa uchama, kwaye kukho ivumba elinamandla. Igazi linokuvela kwi-microscopically.
Ubukho bamatye kwisinyi okanye kwizintso zisenokubangela ukopha okubonakalayo okanye okubonakalayo. Ezi ngqalutye zikhula kancinci kancinci ukusuka kwezinye iikristale ezincinci Azivelisi izifo de zithintele umjelo womchamo, zibe ziintlungu ezingathethekiyo.
Umhlaza inokuba sesinye isizathu. Xa sele ikwinqanaba eliphezulu ngokufanelekileyo, inokubangela ukopha ukuba kwenzeke njengophawu. Ayidli ngokubonisa ubungqina bale ngxaki de ibe iphuhliswe ngokupheleleyo, kuba kumanqanaba ayo okuqala ayidli ngokunika iimpawu.
Ukwenzakala okanye ukuvuthela kwindawo yezintso kunokubangela ukopha. Ngokuqhelekileyo ayichaphazeli into enzima kakhulu, kodwa ukubetha okanye ukwenzakala kwizintso kunokudala uloyiko oluncinci, lubonakale ngegazi.
Kukho iimbaleki ezinkulu abaye bachatshazelwa koku kopha emva kokuziqhelanisa nomdlalo onzima. Ukuzivocavoca ngamandla kwiimeko ezininzi kubangela i-hematuria enkulu kwaye oku kungenxa yokwenzakala kwisinyi, ukuqhekeka kweeseli ezibomvu zegazi okanye ukuphelelwa ngamandla kwamanzi emzimbeni.
Kwezinye iimeko, ukopha kungenxa yembali yosapho, mhlawumbi ngokuba sengozini yokopha kumchamo. Amanye amayeza afana ne-aspirin, okanye iziyobisi ezichasene nokudumba kunye nezinye izibulala-zintsholongwane ezifana ne-penicillin ziyayinyusa le meko.
Indlela yokuphatha ugqirha kufuneka ahlole ukuba yintoni ingxaki ngesisombululo sayo esingcono. Kwimeko yosulelo, kunokucetyiswa amayeza okubulala iintsholongwane. Kodwa ukuba loo nto ayingonobangela kuya kufuneka zilawulwe ezinye iintlobo zamayeza. Ngesampuli yomchamo kuya kucaciswa ukuba yintoni imbangela yokubonakala kwegazi kumchamo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » ZeMpilo » Igazi kumchamo emadodeni
Uyenza njani inkwenkwe ukuba ithande
Amadoda anempandla adumileyo